Hurumende Yotsika Madziro Kuti CCC Isasarudze Anofanobata Chigaro chaMeya muHarare
Meya weHarare vakambomiswa basa VaJacob Mafume
Kunetsana kurikuitika pakati pebazi rezvekutongwa kwematunhu nekanzuru yeHarare koenderera mberi vamwe vachiti zvokonzera kusabudirira kwezvirongwa zveguta kusanganisira kucheneswa kweguta.
Tsamba yatambirwa nekanzuru huyewo iri mumaoko eStudio 7 kubva kubazi rezvekutongwa kwematunhu inoti, kusarudzwa kwevakafanobata chigaro chameya weHarare, VaEnock Mupamaonde vebato reCitrizens Coalition for Change nemusi weChishanu chapfuura kwakaitwa zvisiri pamutemo nekudaro zvese zviga zvakatorwa nekanzuru mumusangano uyu hazvisi pamutemo.
Tsamba iyi yauya mushure mekunge VaMupamaonde vaita musangano nevatori venhau.
Asi vachitaura neStudio 7 VaMupamaonde vati vakatyamadzwa zvikuru netsamba iyi vachitiwo haisi pamutemo sezvo yabva kune vakasanobata chigaro chemunyori webazi iri vachitiwo vacharamba vari pachigaro ichi sezvo vakasarudzwa zvichitevedzwa mutemo.
Vatiwo zviri kuitwa izvi inzira chete yekungovhiringidza mabasa akanaka anoda kuitwa nekanzuru yavo.
Tsamba iyi inotiwo bazi rezvematunhu rinoti rinocherechedza vari noti vakafanobata chigaro chameya VaStewart Mutizwa veMDC-T avo vakasarudzwa panguva iyo mamwe makanzura ainzi aitsigira mutungamiri weMDC Alliance panguva iyoyo VaNelson Chamisa akadzingwa mukanzuru naVaDouglas Mwonzora veMDC-T
VaMtizwa vange vasiri kudaira nharembozha yavo patavafonera tichida kunzwawo maonero avo panyaya iyi.
Gweta VaMarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti hakuna chisiri pamutemo chakaitwa nemakanzura akaita musangano neChishanu vachiti guta rinofanirwa kutungamirirwawo nemunhu akasarudzwa nemakanzura akasarudzwa nevanhu.
Izvi zvatsigirwawo neumwe wemakanzura eCitizen Coalition for Change VaDenford Ngadziore avo vati hapana chakaipa kuti vasarudze vakafanobata chigaro chameya vakamirira kudzoka kwameya Jacob Mafume.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu VaJuly Moyo. Asi mumwe kanzura weguta reHarare, VaMartin Matinyanya vekuMbare vakapinda pasi pebato reZanu PF vashoropodza zvakanyanya makanzura ebato reCCC vachiti varikuvhiringa mabasa ekanzuru nekuda kuchinja chinja zvakabvumirwa panguva iyo vaive vasiri makanzura,
Mumusangano wavo nevatori venhau, VaMupamaonde vatetera kuvagari vemuHarare kuti vabatsirwe kuchenesa guta vachiti havana zvekushandisa zvakakwana.
Vatiwo vakawirirana kutanga chirongwa chekuchenesa guta kubva china chevhiki rino kwemasondo mana.
VaMupamaonde vatiwo kunyangwe hazvo kune kunyunyuta kukuru kubva kuvagari kuti kanzuru inowana mafuta ekudzingirirana nevatengesi vemumugwagwa asi vachishaya mafuta ekufambisa mota dzinotakura marara vati mari dzekanzuru dzinezvinangwa zvakasiyana-siyana nekudaro vanodzingirirana nevatengesi ava ibasawo ravo.
Vatiwo mumusangano wavakaita neChishanu vakaramba zvekuti vanhu makumi matanhatu vaende kuZimbabwe International Trade Fair uko kwaifanirwa kushandisa mari yavati yaisvika zviuru zana nemakumi matatu nezvitanhatu yekuAmerica vakakurudzira kuti kuende vanhu vatanhatu chete. Asiwo vamwe vataura neStudio 7 vanoti zvisinei nechiga ichi vanhu vakaenda kuZITF vanodarika zvakatarwa nemusangano izvi.
VaMupamaonde vatiwo kanzuru yavo iri kuzeya nyaya yekuti zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvemari inobhadharwa nenzvimbo dzakasiyana siyana dzemuguta ishande kunzvimbo idzi,